I-South Park- I-Purple Barney Guesthouse - I-Airbnb
I-South Park- I-Purple Barney Guesthouse
I-Historical South Park Purple Barney guesthouse. Yakhelwe ohlangothini lwesokudla lodade abathathu, ezimbili zangakwesokudla zalawa ma-shotgun cottage ka-1920 zathengwa yimina, isishoshovu sasendaweni, esazihlubula zombili zaze zafika ezindongeni. Ozokuthola ingxube yesimanjemanje yomlando, yesimanjemanje, nemaphakathi nekhulunyaka, enosilingi ophahleni, ukukhanya kwesibhakabhaka kukho kokubili igumbi lokulala negumbi lokugezela elibanzi, kanye nokubonga okuphephile, okunethezekile, nokuthulile kokufakwa ngaphakathi, amawindi amasha neminyango. I-Tin Roof Entsha! Umphathi wakho uyiVet Eqinisekisiwe Yesevisi Ekhubazekile.
Unomsebenzi ogcwele wendlu, obekwe endabeni eyodwa. Ilokhi ehlakaniphile ye-Schlage emnyango ongaphambili ikuvumela ukuthi uzihlole ngokushesha. Ukufinyelela ku-inthanethi ye-WiFi yamahhala kunikezwa, kuyashesha kakhulu futhi. Indlu yokugezela ivulekile futhi ilula, futhi ubhavu uyandiza. Kukhona iwasha nesomisi ekhabetheni elikhulu elingaphandle kwekamelo lokulala. Kukhona isistimu yokuphepha egadiwe, kanye ne-Nest thermostat. Kukhona isipikha se-Bose egumbini lokuhlala- esinoxhumo lwe-bluetooth. Ifenisha iyingxube ejabulisayo encike ku-Mid century yesimanjemanje. Sinemidlalo yebhodi embalwa, amakhadi, futhi kunjalo, ama-TV ahlakaniphile angu-2- eyodwa ene-Roku Soundbar kanti enye i-Roku TV nje. Ayikho ikhebula, kodwa ukuhlela emoyeni, nokufinyelela kunoma yiziphi izinkonzo ozibhalisele.
Uzothola ikhishi lesimanje ligcwele wonke amathuluzi ozowadinga; i-toaster, umenzi wekhofi, i-microwave, i-blender. I-microwave iyintsha sha- njenge-Kucht Dual fuel stovegas top, i-oven kagesi. Isiqandisi naso sisha. Sicela uyigcine ihlanzekile. Kunezithako eziyisisekelo, usawoti kanye nopelepele, amafutha omnqumo, nezinto zokubhaka, izitsha. Izivakashi ziletha izithako, okokugqoka kwesaladi, njll- futhi zizishiye. Ngikhetha ukungakhiphi izinto ezinhle ngokuphelele. Uma ungafuni ukuyisebenzisa - musa. Konke okungeziwe kwasekhishini kunikezwa ukuze kube lula kuwe hhayi njengengxenye yobudlelwano bakho benkontileka ne-AirBnB noma mina. Uma kunenkinga ngenhlanzeko- ngithinte ngohlelo lokusebenza lwe-AirBnB- futhi ngizophumela obala (ngiba semgwaqweni isikhathi esiningi). Qaphela, angikwazi ukuhlola zonke izitsha ukuze ngithole amabala amanzi- njll. Lo mshwana wokuzihlangula wengezwe ngemva kokuba othile ebize ikhishi ngokuthi "grimey" ngemuva kokuthi bonke abanye besinike amamaki avelele okuhlanzeka. Isinaphi esiphelelwe yisikhathi akusona isizathu sokukhansela ukuhlala kwakho.
Uma udinga i-B&W noma ukuphrinta ngemibala, noma igumbi lenkomfa labangu-6 elinephrojektha njll- sinalezo ehhovisi lami izindlu eziyisi-6 ezansi nomgwaqo. Singamukela amaphakheji ezinkomfa zakho, njll. ehhovisi lami.
*Qaphela - leli yikhaya elineminyaka eyi-100. Naphezu kwenani elikhulu lamakati e-feral eSouth Park, ngezinye izikhathi, amagundane angena ekhaya. Sinezicupho uma kudingeka.
Izilwane ezifuywayo eziziphethe kahle zamukelekile uma zihlelwe kusengaphambili, futhi uma uhlala ngaphezu kwamaviki angu-4, inkokhiso eyengeziwe engu-$95 yokuhlanza ukhaphethi izofuneka ngaphambi kokugunyazwa. Kukhona igceke elibiyelwe. Sicela ucoshe indle yomdlwane wakho ukuze igceke lihlanzeke ukugunda kanye nesivakashi esilandelayo.
Ukupaka kusemgwaqweni, futhi nginamakhamera okubuka imoto yakho.,
Ngathuthela eSouth Park ngo-1986. Ngike ngaba umongameli wendawo futhi ngikhuthele kakhulu enhlanganweni yendawo. Kuyindawo e-AWESOME "lapho omakhelwane baba abangane." Amaphathi ethu amadala aqhubekayo ehlobo kanye nemicimbi ekhethekile unyaka wonke asenza sisebenze ndawonye. Ungahamba uye ezindaweni eziningi ezimangalisayo. Isondele kakhulu kuzo zombili iMiami Valley Hospital kanye neNyuvesi yaseDayton kanye neHistoric Woodland Cemetery. Isifunda sase-Oregon kanye nedolobha zihamba kancane nje. Sinepizza yasendaweni emnandi, ikhofi, namabha kanye nezindawo zokuphuza utshwala - konke kungaphakathi kwamabhulokhi angu-4-5 alapho uzohlala khona. Lena kuseyindawo ethokozisayo- futhi sinabantu abahamba endaweni abangase babe nenhlanhla encane. Ngincoma kakhulu njalo ukukhiya imoto yakho futhi ungashiyi lutho lwenani kuyo- noma ebonakalayo. Amakhamera okuvikela amboza umgwaqo ongaphambili- kodwa- awavimbi abantu ukuthi babheke izimoto ezingakhiyiwe ekuseni.
Ngihlala ngaphesheya komgwaqo futhi ihhovisi lami lisekhoneni lebhulokhi. Ngihlala ngikhona, kodwa akufanele uhlangane nami ngaphandle uma ufuna ngempela. Nginokhiye ohlakaniphile weSchlage emnyango ongaphambili- uzothola imiyalelo yokuwusebenzisa ngobusuku bangaphambi kokungena.
Ngihlala ngaphesheya komgwaqo futhi ihhovisi lami lisekhoneni lebhulokhi. Ngihlala ngikhona, kodwa akufanele uhlangane nami ngaphandle uma ufuna ngempela. Nginokhiye ohlakaniphile…